Munaasabadda 26-ka June oo laga xusay Magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Munaasabadda 26-ka June oo laga xusay Magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada)
Munaasabad lagu xusayay 56 guurada ka soo wareegtay markii calan Soomaaliyeed laga taagay dhul Soomaaliyeed, isla markaana gobollada Waqooyi ay xornimada ka qaateen gumeystihii Ingiriirka, ayaa waaxaa xalay lagu qabtay Magaalada Muqdisho.
Munaasabadan, ayaa waxaa lagu qabtay Xarunta Dowladda Hoose Xamar, waxaana ka qaybgalay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud,Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenka Somaliya, Maxamed Cumar Carte, Wasiiro, Xildhibaano, Saraakiil ciidan iyo marti sharaf kaloo lagu soo casuumay.
Munaasabadda oo si heer sare ah loo soo agaasimay, ayaa Fannaaniinta Hobolada Qaranka Waaberi, waxa ay madashada ku soo bandhigeen suugaan ka hadlaysa toddobaadka xoriyadda.
Jeneraal Jaamac Maxamed Qaalib oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii dhexe ee dalka, ayaa sheegay in munaasabadaan ay qiimo wayn ugu fadhido guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale iyo Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeya oo ahaa hormuudkii soo qaban qaabiyay munaasabadan, ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed looga baahanyahay inay ka shaqeeyaan Midnimada Umadda Soomaaliyeed.
Ra’iisal Wasaare, ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeyay munaasabadda 26-June, isagoo tilmaamay in Ummadda Soomaaliyeed ay u midoobaan sidii ay u hanan layaaeen amniga dalka.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay madasha, ayaa marka hore Umadda Somaliyeed ugu hambalyeeyay 56 guuradii ka soo wareegtay markii gobolada Waqooyi ay xornimada ka qaateen gumeystihii Ingiriiska.
“Caawa iyo muhiimadda ay leedahay xafladan waa laga hadlay, Ra’iisul wasaare ku-xigeenkuna wuu ku mahadsanyahay sida uu noogu taabtay taariikhda loo soo maray maanta oo kale, Sooamaaliya, 1960-kii calanka caawa oo kale la taagay isago xor ah waa arrin farxad leh inaan xusno.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha, ayaa sheegay in loo baahaynayay in bulshada Soomaaliyeed ay la yimaadaan garowshiyo ku aadan dhibta walaalaha waqooyi gaaray, xoogana la saaro ka shaqaynta Midnimada Umadda Somaliyeed.
“Waxbaa naga khaldamay, wixii naga qaldamay inaan saxno unbaa diyaar u nahay, mana rabno qalad horey u dhacay, markale inay soo laabato, waxaana diyaar u nahay inaan ka wada shaqeyno midnimada Ummadda Soomaaliyeed.” Ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya oo hadalkiisa ku soo gabo gabeeyay “SOOMAALIYA HA ISRAACDO, SOOMAALIYA HA MIDOWDO, SOOMAALIYA WAY NOOSHAHAYE LAAKIIN WAXAAN LEENAHAY HA MIDOWDO OO HA IS RAACDO.”
Weerarkii Hotel Naasa hablood oo la soo afjaray & Khasaaraha oo kordhay(Daawo Sawirada)
DEG DEG: Qarax Ismiidaamin ah oo goor dhow ka dhacay Hotel Naasahablood ee Isgoyska KM4